Maitiro ekudzima mameseji eWhatsApp kuitira kuti iwo anogamuchira asakwanisa kuaverenga | IPhone nhau
Ndiani asina kutumira meseji nekukanganisa kune mumwe munhu asiri iye anofanirwa kuiverenga? Kana ndiani asina kudemba kutumira meseji paakangodzvanya bhatani rekutumira? Iri rinotora nguva basa inowanikwa mune mamwe maemail uye mamwe mameseji maficha senge Teregiramu, inotoshanda paWhatsApp futi, uye isu tinokuudza uye tinokuratidza maitirwo azvo pavhidhiyo.
Hauchazo nyara kutumira meseji yaive yakagadzirirwa mumwe wako kune mumwe munhu, kana iyo pikicha yaive yakagadzirirwa boka re peña neChina, kwete iri kubasa. Iwe unogona pakupedzisira kudzima WhatsApp meseji, uye kunyangwe iine chinyorwa chidiki icho chinogara chiri chakanaka kuziva, iyo inogamuchirwa kwazvo.
Iwe unogona kunge wakatumira meseji kana gumi, hazvina basa nenhamba, nekuti unogona kuvabvisa mune imwe kudonha swoop. Kuti uite izvi, unofanirwa kudzvanya uye kubatirira pane imwe yemeseji iwe yaunoda kudzima, yakajairika Apple pfungwa yemenyu inozoonekwa. Dzvanya pamuseve wekurudyi kuti uone zvimwe sarudzo, wobva wasarudza «Delete». Ino ndipo paunogona kusarudza meseji dzaunoda kudzima uye kana wapedza kubaya pamarara anogona mukona yezasi yekuruboshwe. Wobva wasarudza iyo sarudzo "Delete kune vese" uye iwe uchaona kuti mameseji anga achisiya sei chinyorwa "Iwe wabvisa iri meseji" panzvimbo.
Naizvozvo haisi yakachena maneuver asi inosiya mucherechedzo wayo, asi zvirinani kuti zvinyorwa zvekutanga hazvizo verengeka. Unogona kutowana chikonzero chekuudza munhu iyeye, asi huipi hukuru hwakadzivirirwa. Ruzivo rwakakosha: unongova nemaminitsi manomwe ekudzima iwo mamesejiMushure menguva iyoyo, hauchakwanise kuzviita, saka usafunge nezvazvo zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Maitiro ekudzima meseji dzeWhatsApp kuitira kuti anogashira arege kuaverenga